Dhageyso:Xildhibaano ka tirsan soomaaliya ayaa gaarey baydhabo dhanka kalane magaaladaas waxaa aad uga socota qaban qabada loogu jira soo doorashada xubanaha u tartamaya kursiga barlamaanka dowlada soo socota. | warsanradio baydhabo
Home WARARKII MAANTA	Dhageyso:Xildhibaano ka tirsan soomaaliya ayaa gaarey baydhabo dhanka kalane magaaladaas waxaa aad uga socota qaban qabada loogu jira soo doorashada xubanaha u tartamaya kursiga barlamaanka dowlada soo socota.
Baydhabo(WRB)Magaalada baydhabo oo xarun KMG u ah maamulka koonfur galbeed waxaa kusoo qul qulaya xubnaha doonaya iney ka mid noqdaan barlamaanka dowlada soo socota ee dhowaan doorasheeda loo dareeri doono.
Xubno xildhibaanada barlamaanka wakhtigiisa dhamaanaya ee dowlada soomaaliya iyo kuwo siyaasada ku cusub oo kuriga xildhibaanada doonaya ayaa olalahooda ka socda magaalada,wadooyinka ayaa lagu arkayaa gadiid sawiro kala duwan lagu dhejiyay.
Maanta ugu danbeysay waxaa garoonka diyaaradaha kazoo degay xildhibaano ay ka midka ahaayeen gudoomiyihii hore ee barlamaanmkii KMG ahaa sheikh aadan madoobe,Wasiiradii caafimaadka xaawo maxamed xasan,sareedo maxamed cabdalla iyo xubno kale.
Wasiiradii hore ee caafimaadka xukuumada soomaaliya xaawo maxamed xasan oo hadal kooban u jeedisey bulsho soo dhaweysay ayaa u sheegtay iney doortaan shakhsiyaadka la imaan kara waxqabadka bulshada ay dooneyso.
Madaxtooyada maamulka looga arimiyo,xaafadaha qaar ee magaalada,wadooyinka iyo goobaha bulshada ay isugu imaaneyso ayaa noqdey kuwo laga hadal hayo arimaha olalaha doorasho ee baydhabo ka wadaan musharaxiinta.
W/Q/Wariye Muxidiin Xasan Maxamed (Xusni)
Dhageyso:Xildhibaano ka tirsan soomaaliya ayaa gaarey baydhabo dhanka kalane magaaladaas waxaa aad uga socota qaban qabada loogu jira soo doorashada xubanaha u tartamaya kursiga barlamaanka dowlada soo socota. was last modified: September 17th, 2016 by Siid Cali
Sarkaal sare oo laga dilay IS
Dhageyso:-wareysi aanu la yeelanay afhayeenka mamulka KGS Cabdiqaadir Nadaara.
Dhageyso:-Wareeysiga Mahad aan La Yelanay Waa Taliyaha Booliska Gobalka Baay..